DASSK ၁၈ ရာစုလို့ မပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေသူများအတွက် Daw Suu confirmed that Rohingyas were in Burma since 18 century | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeDASSK ၁၈ ရာစုလို့ မပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေသူများအတွက် Daw Suu confirmed that Rohingyas were in Burma since 18 century
DASSK ၁၈ ရာစုလို့ မပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေသူများအတွက် Daw Suu confirmed that Rohingyas were in Burma since 18 century
May 4, 2017 May 4, 2017 drkokogyi
18 century = ၁၇၀၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့က ၁၈၀၀ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ (up to 31st Dec 1799)
18th. Century was between AD 1700-1800! …(1st Jan 1700 to 31 Dec 1700…they should be even recognized as Ethnic Minority or Tine Yin Thars.
( Because 1st century = 00 Jan to 99 Dec 31. 2nd Century = 100 Jan 1 to 199 Dec 31)
Even in the Rakhine history, Northern Rakhine was under Burmese kings for about5decades only. It was changing hands between Indian Sultans, Mogul Empire, Rakhine Kings (some were even under the influence of Moghul Kings), British, Japanese …. So if they enter even in AD 1700
Ro Nay San Lwin ၁၈ ရာစုလို့ မပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေသူများအတွက်
မနေ့တနေ့က ပေါ်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံက ခိုးဝင်လာသူ
၁၈ ရာစု ကထဲက ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ ပြသနာတဲ့ဗျာ
နောက်ဆိုရင် ဗြဟ္မာကြီး ၄ပါးရဲ့ ပြသနာလို့များ
လာ ရာတွေ ပြောနေတော့တာဘဲနော်
စစ်တပ်ရဲ့ မုဒိမ်းမှု၊ လူသတ်မှု၊ မီးရှို့မှုတွေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကာကွယ်ပေးရင်းနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေက တိုင်းရင်းသားဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံသွားပါတယ်။
ရခိုင်ပြဿနာက ၁၈ ရာစုကတည်းက ရှိနေတဲ့ ပြဿနာလို့ ပြောခြင်းက —
၁၈ ရာစုဆိုတာ ၁၇၀၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁) ရက်နေ့က ၁၈၀၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ထိကို ရည်ညွန်းခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသား ဥပဒေမှာ ၁၈၂၃ ခုနှစ်မတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာ မှီတင်းနေထိုင်သူများကို တိုင်းရင်းသားလို့ သတ်မှတ်တယ်။
လိမ်ရင်းလိမ်ရင်းနဲ့ အမှန်တရားတစ်ခု ပါသွားတတ်တယ်ဆိုတာ အဲဒါမျိုးပါ။
ရိုဟင်ဂျာတွေက ၁၈၂၃ မတိုင်မီကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ် (အဲဒီတုန်းက အာရ်ကာန်ဒေသ) မှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀န်ခံလိုက်ရပါပြီ။
← မေးပါရစေ လ၀က က တာဝန်ရှိသူတွေကို ၊ ခင်ဗျားတို့၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ နိင်ငံသားမှတ်ပုံတင် ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့၁ သန်း နီးပါး တ၇ုတ်တွေကို အခုပြန်စစ် ရဲ ပါသလား?
Not welcome: Japan tough to crack for refugees →
One thought on “DASSK ၁၈ ရာစုလို့ မပြောခဲ့ဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေသူများအတွက် Daw Suu confirmed that Rohingyas were in Burma since 18 century”
Twal Har feeling Funny.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ရခိုင်ပြဿနာဟာ ၁၈ ရာစုကတည်းက ရှိနေတဲ့ ပြဿနာလို့ ကမ္ဘာ့သိအောင်ပြောသွားတဲ့ စကားကို ကျနော်ကတော့ ကြိုဆိုပါတယ်။
သူမှားပြီး သတိလက်လွတ်ပြောမိတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပညာတတ်တစ်ယောက်ပါ။ ရခိုင်ပြဿနာကို အသေအချာလေ့လာဖတ်ရှုပြီး ဖြစ်မယ်ဆိုတာကို ယုံပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာရှိတာလက်ခံကြောင်း ကမ္ဘာသိအောင် တစ်ဖက်လှည့်နဲ့ပြောပြလိုက်တာလို့ ယူဆပါတယ်။ အဲဒီ ၁၈ ရာစုကတည်းက ပြဿနာဆိုတဲ့စကားနဲ့အတူ တခြားပြောသွားတဲ့စကားတွေကတော့ အဆင်တန်ဆာတွေပါပဲ။ တကယ်သူပေးချင်တဲ့ Message က ၁၈ ရာစုကတည်းက ရခိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ စကားပဲလို့ ကျနော်ကတော့ ကောက်ချက်ချပါတယ်။
အဲဒီလိုပြောပြီးတစ်ချိန်ထဲမှာပဲ EU ကနေ အလှူခံနေပါပြီ။ :O